#YouTubeBlack Voices Fund Na-ewepụta Maka Ndị Okike Black Na-eme nke Ọma
#YouTubeBlack Voices Fund na-ebupụta ego maka ndị na-ese oji na-eme nke ọma
Twitter: Oge iji gbochie iwu ahụ [ICT Clinic]
Egwu YouTube na-agbasawanye ntinye aka na egwu ojii site na ohere mmụta ọhụụ maka 2022
Ebe E Si Nweta: Tubefilter
Egwu YouTube na-etinyekwu ego na obodo ndị ojii site na ịmepe ngwa na #YouTubeBlack Voices Fund Class nke 2022, ebumnuche iji mee ka ndị na-ese oji nwee ike ịzụ ahịa ọrụ ha.
Grant ngwa maka #YouTubeBlack Voices Fund Class of 2022 ga-emeghe na 21 June 2021.
A gbasaa ntozu oke ịgụnye ndị na-ede abụ na ndị na-emepụta ihe, na-ekwe ka ndị ojii ojii bi na Kenya, South Africa, Nigeria, Canada na UK, na mgbakwunye na US, Brazil na Australia, itinye.
Egwu YouTube na-ebuputa mmekorita ohuru na ulo akwukwo mmuta a ma ama, 1500 Sound Academy, nke sitere na GRAMMY-award mmeri ndi na-ede egwu na ndi na emeputa, James Fauntleroy na Larrance "Rance" Dopson.
Site na nkuzi #YouTubeBlack Music Future Insiders, YouTube ga-akwụ ụgwọ agụmakwụkwọ mmụta iri zuru oke na mmemme Academy Online Live Online Music & Industry Fundamentals.
"Otu egwu egwu YouTube nwere obi uto ịgbasa ego #YouTubeBlack Voices ma mepụta ohere ọhụụ ma na-atụgharịkwa uche na ọganihu emere rue taa," ka Alex Okosi kwuru, onye isi njikwa EMEA YouTube maka ahịa na-apụta.
Okwu mmuta nke onwa isii a ga - ahuta ndi nnata ihe na - emeputa ihe banyere egwu, injinia, ide abu, songgwakọta, azụmaahịa egwu na otutu ihe, ” ọ na-agbakwụnye.
Site na klas nke mmalite nke 2021, #YouTubeBlack Voices Fund nyere akụrụngwa gụnyere ntinye aka nke otu, onyinye mkpụrụ, ọzụzụ na mmemme ịkparịta ụka nke na-enyere ndị enyemaka 21 aka iru uto dị egwu, ọ bụghị naanị na YouTube kamakwa na ọrụ ha. Fọdụ n'ime ihe ndị a rụzuru:
Site na Jenụwarị 2021 ruo Eprel 2021, klas ahụ natara echiche 1.4B na ọwa egwu gọọmentị ha
Ndị na-ese ihe isii hụrụ ihe karịrị 50% uto na ndị na-edebanye aha ha n'usoro ọrụ (Joy Oladokun, Miiesha, BRS Kash, Jensen McRae, serwwwithfeet, na Yung Baby Tate)
Ndị na-ese ihe anọ hụrụ 200% uto na ọkwa ọwa gọọmentị ha (serpentwithfeet, Jensen McRae, Yung Baby Tate, na Joy Oladokun)
Dị ka akụkụ nke ememme Afọ Ọhụrụ nke YouTube Music, Sho Madjozi, Sauti Sol, na Fireboy DML, kwadoro nanị iyi egwu na-egwu egwu na egwu ọ bụla nke ọwa ha.
Rexx Life Raj, Joy Oladokun, na Tkay Maidza rụrụ na mmemme mmemme YouTube kwa afọ
Mariah The Scientist rụrụ nanị ndụ setịpụrụ maka YouTube Music Nights si Center Stage na Atlanta, na nkwado nke National Independent Venue Association (NIVA)
Future Insiders na-ezube ịkwadebe ihe ntorobịa na-enweghị nsogbu na enweghị nchekwa, ndị na-achọ ịbanye n'egwú na ụlọ ọrụ okike, nwere nka na mmepe ọdịnaya.
Mgbe mmemme a gara nke ọma, Future Insiders ga-agbasa ụwa niile na nkọwa ndị ọzọ a ga-akọrọ mgbe afọ a gasịrị.
Ọzọkwa, iji mee ememe ọdịbendị ojii, YouTube Music emegoro #YouTubeMusic Moments - nchịkọta nke usoro ọdịnaya, iyi iyi, na ihe omume bụ isi ebumnuche ha bụ ịme emume Black, njirimara, na ahụmịhe site n'aka ndị ojii ojii na ndị isi chere na egwu .
YouTube nọgidere na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ onye na-akwado ma na-akwado ndị obodo dị iche iche na-akpọ ikpo okwu ụlọ ma ga-aga n'ihu ịgbasa mbọ ya iji kwado obodo ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe na ndị a na-akọwaghị.